Akanjo fahavaratra 2016: Zara, Lolablue, Xti | Bezzia
Akanjo fahavaratra 2016: Zara, Lolablue, Xti
Eva alonso | | kiraro
Tonga ny fahavaratra ary miaraka amin'izany ny fotoana anaovana modely kiraro vaovao amin'ny vanim-potoana. Kapa, ​​espadrilles, wedges, kapaoty… Ny kiraro farany sy farany ary mafana indrindra dia havaozina amin'ny fahatongavan'ny vanim-potoana fahavaratra. Ireto misy sasany amin'ireo tolo-kevitra mety ho hitanao.
Ao amin'ny fanangonana nomaninao Zara manana maodely maro karazana izahay izay maneho ny fironana farany amin'ny kiraro. Ballerinas misy tsipìka, kapa angady, espadrilles, kapa misy pompon na metaly no sasany amin'ny filokana an'ny orinasa Inditex amin'ity fahavaratra 2016 ity.
1 Zara, fahavaratra kiraro 2016
2 Lolablue, fahavaratra kiraro 2016
3 Xti, kiraro fahavaratra 2016
Zara, fahavaratra kiraro 2016
Modely sy fomba isan-karazany amin'ny fanangonana kiraro Zara ho an'ny vanim-potoana lohataona-fahavaratra 2016. Ny orinasa dia tapa-kevitra ny hampiditra ny fironana farany amin'ny kiraro, manomboka amin'ny maodely sahy indrindra amin'ny silhouette mahazatra izay miverina isaky ny vanim-potoana, toy ny ballerinas na kiraro fitsarana.
Kiraro fisaka na ballerinas dia aseho amin'ny endriny farany misy azy, miaraka amin'ny tsipìka, ary amin'ny loko tena vehivavy sy kanto. Espadrilles, fisaka na miaraka amin'ny sehatra esparto, safidy mahazatra hafa hankafizanao ny fahavaratra tsy hijalian'ny tongotra.
Ny kapa dia kiraro kintana amin'ny fahavaratra indray. Ity vanim-potoana ity, iray amin'ireo fironana kintana dia ny kapa miaraka amina pompon-doko miloko na karazana romana misy fehy mahatratra ny lohalika. Mba hahazoana santimetatra vitsivitsy ny haavony, tsy misy zavatra ahazoana aina kokoa noho ny kinova an-tsehatra, izay azontsika atao amin'ny tokana hazo na amin'ny loko matevina toa ny voantsinapy.
Amin'ny fotoana manokana dia manana safidy toa izany isika ny metaly na ny kapa vita amin'ny firavaka. Miaraka amin'ny openwork, nasiana tombo-kase, voaravaka na mamirapiratra na milentika, mainty no loko kintana amin'ity fironana ity ary ho safidy iray amin'ny hetsika amin'ity fahavaratra ity dia manolotra safidy kapa ho an'ny metaly metaly i Zara: amin'ny volamena, volafotsy na varahina. toy ny kapa miaraka amina vilia baolina malalaka, misy strappy na misy antsipirian'ny voninkazo.
Ny fifangaroana sy fanontana maro loko dia iray amin'ireo fironana kintana amin'ny kiraro fahavaratra. Ao amin'ny fanangonana Zara dia miavaka ny mahazatra pirinty biby, amin'ny alokaloka vaovao toy ny maitso na manga, Iray amin'ireo fironana lamaody amin'ity vanim-potoana ity koa ny kiraro, Ireo paty, izay mifanaraka amin'ny kiraro fisaka na kiraro fanatanjahan-tena amin'ny modely mahafinaritra.
Hitanay ihany koa ny fironana ara-poko amin'ity fahavaratra ity, izay tanteraka kapa vita amin'ny sisiny, manambatra ny feo voajanahary amin'ny loko. Ary ny studs na ny modely vita amin'ny hoditra mirandrana, izay eo indray amin'izao fahavaratra izao.
Lolablue, fahavaratra kiraro 2016
Ny orinasan'i Lolablue dia efa manana ny katalaoginy vaovao miaraka amin'ireo maodely fahavaratra vaovao. Ao amin'ny fanangonana azy ho an'ny fahavaratra 2016 dia hitantsika ny tena fironana amin'ny kiraro amin'ny vanim-potoana, toy ny feon-metaly, kapa vita amin'ny kofehy na fanontana.
Lolablue dia manolo-tena amin'ny loko vaovao ary mampiditra endrika vaovao amin'ny fanangonana azy, saingy tsy mandà ireo fitaovana efa niasa sy nitandrina ny pitsopitsony. Ny tena tanjony dia ny fahaizan-tsaina, filokana amin'ny a kiraro ahazoana aina sy miasa, azo ampifanarahana amin'ny endrika sy fotoana samihafa nefa tsy miala amin'ny fahamendrehana tsotra, amin'ny fitaovana toy ny patanty hoditra, satin, suède na esparto.
Ny kapa dia kiraro kintana avy amin'ny fanangonana, ny maodely fahavaratra quintessential. Ao amin'ny tolo-kevitra Lolablue no ahitantsika azy ireo amin'ny vanim-potoana hafa, misy na tsy misy ombelahin-tongony, misy sehatra na wedges ... na ahoana na ahoana, amin'ny kinova fahavaratra indrindra misy azy ireo miaraka amina premium amin'ny fampiononana. Ny kapa fisaka, tonga lafatra isan'andro isan'andro, dia tsy eny an-dalana, fa ireo maodely avo volo kosa dia miorina amin'ny fandresena ho an'ireo fotoana lehibe sy ireo fisehoan-javatra amin'ny vanim-potoana.
Ny paleta miloko dia miovaova, manasongadina ny loko mazava sy mahery, mahazatra ny fahavaratra, toy ny haran-dranomasina, frezy, aquamarine, klein manga, maintso, fuchsia na voasary. Mazava ho azy, miaraka amin'ny tononkira tsy miandany toy ny miboridana, fotsy, beige, fotsy na mainty ilaina. Ary toy ny fironana kintana amin'ny vanim-potoana, metaly izay miverina amin'ny endrik'izy ireo volamena, volafotsy na varahina, mba hanampiana taratra hamirapiratra amin'ny fahavaratra.
Xti, kiraro fahavaratra 2016
Ny soso-kevitr'i Xti vaovao dia tonga amintsika amin'ity fahavaratra ity avy amin'ny tanan'ny tampon'ny Breziliana Alessandra Ambrosio. Ny maodely dia ny sarin'ny fanangonana kiraro vaovao, mpiaro ny fampielezan-kevitr'ilay marika ho an'ny tsipika 'Xti Woman' sy 'Xti Tentations'. Ity katalaogy ity dia mirakitra ny fironana lehibe amin'ny vanim-potoana, toy ny kiraro kiraro, kiraro firavaka, rantsan-tongotra na espadrilles misy wedges esparto.
Miloka ny orinasa feo malefaka, toy ny mofomamy, ny miboridana na feo tsy miandany (volondavenona, beige, mainty, siena ...), saingy misy ihany koa ny toerana ahazoana feo mafimafy kokoa, toy ny manga na vato harana. Tsy misy tsy ampy koa metaly (volafotsy, volamena, champagne na varahina), izay iray amin'ireo fironana kintana amin'ny kiraro amin'ity fahavaratra ity. Ary mazava ho azy ny kilasika Blanco, loko izay tsy afaka tsy eo amin'ny fanangonana fahavaratra.
Ny printy koa dia manana toerana ao amin'ny fanangonana Xti. Ny motif voninkazo, loko rano, ny Print tropikaly na pirinty fatorana. Mikasika ireo fitaovana, ny filokana dia miloka amin'ny lsuède, patant na hoditra, suède, canvas na esparto. Ary toy ny iray amin'ireo zava-baovao amin'ity vanim-potoana ity, ny kitapo feno kitapo dia tafiditra mba hampifangaroana amin'ny kiraro fahavaratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » kiraro » Akanjo fahavaratra 2016: Zara, Lolablue, Xti
Akanjo voninkazo 15 hanampiana loko amin'ny fahavaratra